Dry charlotte - recipe
Raha tsy te-hanelingelina ny fitsapana ianao, na hikorontana mba tsy ho vitanao ny vokatra avy aminy, dia manolotra anao fomba tsotra ho an'ny charlottes vita avy amin'ny maina voatoto. Aza mahazo tara toy izay tsy vitanao fotsiny, satria tsy mila fahaiza-manao manokana na fahaizana manokana.
Ny tsy fahamendrehan'ny endriky ny charlotte dia tsy manamarina ny anarany, satria ny fototra maina dia lafarinina fotsiny ihany, izay, rehefa mahandroina, dia mihosotro amin'ny ranom-boankazo ary mamadika ho dessert mamy.
Mangatsiaka maina miaraka amin'ny paoma ao amin'ny multivark
koba - 165 g;
siramamy maitso - 200 g;
Vanillin na kanelina - manandrana;
bozaka maitso - 25 g;
jiro sotro - 25 ml;
Ny menaka - 165 g.
Apple dia tsara ho an'ny fanasana, esorina amin'ny fototra amin'ny voa sy ny tongotra ary, raha ilaina, dia manala ny hoditra raha toa ka manify loatra. Aorian'izany, avelao ny voankazo mamakivaky lavaka lehibe na manapaka kely kely ary manipy ranom-boasary kely mba tsy ho maizina ny masony.
Ao anaty fitahirizana lalina iray misorata tsara ny lafarinina, ny semolina, ny siramamy, ny vovony ary ny vanilline na ny kanelina.
Ny fahaiza-manaon'ny multivarker dia mibontsina ny dibera ary manohy ny fananganana karandoha maina isika. Eo am-pototr'ilay baolina dia manondraka lafin-totozy maina, avy eo dia rakofy misy paoma sy menaka maina. Avereno amin'ny fomba mitovy ny solaitra rehetra ary hamaranana miaraka amin'ny voankazo tsy maintsy atao maina. Raha toa ianao ka tsy ampy izany mba hanaronana ny tampony dia aza matahotra. Mifangaro vinaingitra maina vitsivitsy kokoa, mampihena imbetsaka ny isam-bolana.
Ampiasao ny ravina amin'ny farany ary alaivo ny tendron'ny charlotte. Voalohany, tokony ho 30 minitra fara-fahatarany hihazona ny frizidera, raha tsy izany dia tena sarotra ny manosika azy io.
Fanteno ny mofomamy "mofomamy" eo amin'ny fampiratiana ary manomàna dimy amby enimpolo minitra alohan'ny faran'ny fandaharam-potoana ary hanitarana izany mandritra ny 40 minitra hafa. Ny fotoana mahandro mandritra ny fotoam-bary dia dimy minitra sy sasany ny charlotte.
Amin'ny faran'ny fizotran'ny fikarakarana, alefaso ny charlotte tanteraka ao anaty vilia, alao avy ao amin'ny fitaovana aloha izy, ary aforeto avy eo amin'ny lovia amin'ny fampiasana ny steam.
Alohan'ny hanompoanao dia azonao atao tsara ny manondraka ny tendrony amin'ny siramamy.
Charlotte avy amin'ny dite maina miaraka amin'ny pears ao anaty lafaoro
pears - 0,9 kg;
menaka - 150 g.
Ho an'ny charlotte, dia tsy misy tsara ny voan 'ny pear, izay ilaintsika ny manasa tsara, miala maina sy madio avy amin' ny tongony sy ny boaty masira. Aorian'izay dia aforeto amin'ny banga ny pears ary manapaha sira kely kely.
Ao amin'ny lovia lalina misaraka dia mamafy rongony, siramamy, poofa ary mamafy kobam-bary. Azonao ampiana vanila na vanila kely. Apetraho tsara avokoa ny kitay maina ary manomboka amin'ny fananganana ilay tavoahangy. Famolavolana ny fofona, alaina am-pitandremana, fetsy tsara dabam-bary ary manondraka lafin-totozy maina eo ambany. Mialà amin'ny sombin-tsiramamy biriky ary miara-matory amin'ny tavy maina. Noho izany dia mamolavola ny tara-pahazavana rehetra isika, ary mamarana miaraka amina setroka maina. Avy eo dia mizara ny dibera, mamakivaky azy amin'ny lavaka, alohan'ny hidirany. Raha tsy nisy fotoana hanangom-bary, dia azonao atao fotsiny ny manapaka azy amin'ny fery matevina ary manaparitaka azy amin'ny tavy.
Ankehitriny dia mamaritra ny endrika amin'ny charlotte ao anaty lavaka fanalefahana efa hatramin'ny 185 degrees ary hijoro mandritra ny dimy amby efapolo minitra na mandra-pahamatrehana ary vonona.
Vita ny pear charlotte dia manome fofona tanteraka amin'ny endriny, ary avy eo dia tapihina kely ary manompo ny latabatra.
Nolotoin'ny ravin-trano ny 15 minitra
Toaka amin'ny kitay ao anaty lafaoro
Tavoahangy anaty fonon-totoaly - ny fomba fitsaboana haingam-pako haingam-pako
Ny mofomamy Prague dia fomba mahazatra
Tavoahangy miaraka amin'ny henom-boasary sy ny toeram-pokontany
Maskin'ny tanimanga manohitra ny akne
Kitapo miaraka amin'ny ronono vita amin'ny ronono - ny sakafo mahasalama mahavelona indrindra amin'ny mofo voapoizina
Mofomamy avy amin'ny yogourt any an-trano
Trimestre ny bevohoka amin'ny herinandro - latabatra
Salady misy holatra matavy
Ahoana ny fisafidianana fonosana fantsom-bozaka iray?
Dexamethasone ho an'ny saka
Ny vokatry ny E211 amin'ny vatana
Ny parrot lehibe indrindra
Fiantohana bisikilin'ny fahasalamana
Nick Jonas sy ny vadiny
Inona no fampiasana voamaina?